Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo faahfaahiyay Wajiga labaad ee shirka Dhuusamareeb | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo faahfaahiyay Wajiga labaad ee shirka...
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo faahfaahiyay Wajiga labaad ee shirka Dhuusamareeb
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa khudbad ka jeediyay xafladda gunaanadka shirka wadatashiga Dhuusamareeb oo ay ka qeyb galeen madaxda maamul goboleedyadda.
Waxaa uu sheegay in shirka maamul goboleedyadda uu kusoo dhammaaday si wanaagsan, islamarkaana maalmaha soo socda uu furmi doono shir kale oo ay kasoo qeyb gali doonaan madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya.
“Waxaa noo furmi doona wajigii labaad oo kasoo qeyb gali doonaan sida aan rajeeneyno madaxda dowladda Federaalka dalka oo aan rajeeneyno in maalmaha soo socdo noo furmo InshaAllah”ayuu yiri madaxweyne Qoorqoor.
Waxaa uu intaasi kusii daray “Reer Galmudug warankoodii yaanbeey ka tunteen, waxaan nabad aheyn oo ay ka shaqeynayaan ma jirto hadii dhaxdooda tahay hadii Soomaali dhaxdeeda tahay”
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa ay aqbaleyn dalabkii madaxda dowlad goboleedyada ee ku aadanaa inay ka qeyb galay shir looga tashanayo arrimaha doorashooyinka, kaas oo lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb.
Madaxda maamul goboleedyada ayaa dhamaantood ku sugan Dhuusamareeb, waxaana qodobada ku jiray war murtiyeedkii ay soo saareen kamid ahaa in madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ka tashadaan arrimaha doorashooyinka iyo amniga.